15ka Hab ee ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Diro Kaarka Debit - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn 15ka Hab ee ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Diri karo Kaarka Debit
Iyadoo uu kor u kaca internetka iyo horumarka joogtada ah ee ku saabsan
warshadaha telefoonada gacanta, dirida lacag ayaa noqday mid aad u fudud. Haddii aad rabto inaad lacag ku xawisho gudaha, bixiso lacag, u sheeg saaxiib qoyska ah si aad u bixiso iibsashada alaabta iyo adeegyada, fursadaha waa in hal mar aad u baahan doonto inaad lacag u xawiso qof kale. Maanta, waxaa jira fursado badan oo online ah oo loogu diro lacag kaarka deynta, iyo habka ma aha mid dhib badan sida ay u muuqato.
Waliigaltee waliigaltee dhibbantaa adda addaa adda addaa adda addaatiin akka ta’e ibsaniiru.
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Lagu Diro
Arrimo badan ayaa gacan ka geysta marka la go'aaminayo habka ugu wanaagsan ee lacag loo diri karo. Qodobbada qaarkood waxaa ka mid ah meesha aad lacagta u dirayso, kharashaadka, iyo xawliga wareejinta.
Iyada oo aan la sii dheerayn, 15ka qaab ee ugu wanaagsan ee lacag lagu diri karo waa:
Akhri: Sida Loo Hawl-geliyo Kaarka Debit-ka ee Chase
#1. Western Union - Xulashada wareejinta ugu fiican
Shaki la'aan, Western Union waxay u kortay inay noqoto mid ka mid ah shirkadaha xawaaladaha ee ugu weyn maanta oo leh caymis adeeg caalami ah. Western Union waxay bixisaa doorashooyin kala duwan oo wareejin ah. Mid ka mid ah sifada gaarka ah ee Western Union waa qalabka qiyaasaha qiimaha kaas oo bixiya kanaalo diri kala duwan, gaarsiinta, iyo fursadaha lacag bixinta.
Waxaad isticmaali kartaa website-ka ama mobile app si aad lacag ugu dirto meel kasta oo aduunka ah. Isticmaalayaasha Western Union waxay lacag ka soo diri karaan kaarka deynta, kaarka deynta ama waxay soo diri karaan lacag caddaan ah wakiilka Western Union.
Adeegyada Western Union ayaa laga heli karaa ilaa 200 oo waddan iyo dhulal leh in ka badan 500,000 oo goobood oo adduunka oo dhan ah.
Ogsoonow, wareejintu maaha mid raqiis ah waxayna qaadan kartaa dhawr maalmood oo shaqo si ay u timaado. Ikhtiyaarada yar ayaa bixiya keenista isla maalinta ama maalinta xigta.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso Western Union
Shabakadda fog ee goobaha adduunka oo dhan
Doorashooyin badan oo lacag caddaan ah lagu wareejinayo
#2. App Lacag - Waxa ugu fiican bixinta gunnooyinka gudbinta
Cash App-ka waxa uu fududeeyaa in lacag la'aana laga soo diro akoonkaaga bangi ama kaarka bangiga ee ku xidhan. Waxa kale oo ay awood u siinaysaa dadka kale inay lacag kuugu soo diraan kaarka deynta ama akoonkaaga bangiga.
Cash App waxa ay u ogolaataa isticmaalayaasha in ay abuuraan shaqsiyadooda
$Cashtag ama magaca isticmaale si loogu fududeeyo dadka kale inay helaan oo ay lacag u soo diraan.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka Cash App-ka ayaa ah in marka dadku is-diiwaangeliyaan adiga oo isticmaalaya kaaga
isku xidhka gudbinta oo samee wareejinta ugu yaraan shan dollar adoo isticmaalaya app-kooda cusub,
waxaad helaysaa $5 gunno ah.
Ogow in Cash App-ka uu u baahan yahay xisaab bangi oo shaqaynaya. Markaad hesho lacag caddaan ah, waxay isla markaaba ku soo baxaysaa hadhaaga abka. Si kastaba ha ahaatee, waxay qaadan doontaa ilaa saddex maalmood in lacagta lagu shubo akoonkaaga bangiga haddii aad rabto inaad lacagta u rarto akoonkaaga bangiga.
Waxaad sidoo kale lacag ugu diri kartaa kaarka deynta isla markaaba. Si kastaba ha noqotee, adeeggu wuxuu soo jiitaa 1.5% kharash.
Qadarka ugu badan ee aad ku heli karto Cash App bishii
waa $1,000. Kuwa raba inay kordhiyaan xadka helitaankooda, shakhsi ahaan aad u gaar ah
macluumaadka waa la codsan doonaa.
Macluumaadka waxaa ka mid ah:
Afarta nambar ee u dambeeya lambarka bulshada
Waxaad sidoo kale soo diri kartaa lacag adoo isticmaalaya kaarka deynta, laakiin maskaxda ku hay in adeeggu soo jiidan doono 3% lacag.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso App-ka Casharka
Aan lacag wareejin
$5 gunno mar kasta oo qof isticmaalo koodka tixraaca si uu u saxiixo oo u diro lacag caddaan ah
#3. Wareejinta siliga - Waxa ugu fiican wareejinta gudaha
Xawilaadda siligga ayaa ka fudud sida ay u dhawaaqdo waana mid ka mid ah siyaabaha ugu da'da weyn ee lacagaha loo diro gudaha iyo dibaddaba. Xawilaadda siligga ayaa u baahan
inaad soo ururiso macluumaadka qaataha, oo uu ku jiro magac buuxa,
lambarka xisaabta, ciwaanka buuxa, iyo lambarka siliga.
Wareejinta siligga, waxaad u baahan tahay inaad shakhsi ahaan uga soo baxdo bangigaaga. Xawilaadaha siligga maxaliga ah ee la sameeyo ka hor wakhtiga goynta bangigu inta badan waxay yimaadaan isla maalintaas halka kuwa lagu sameeyo wakhtiga ka baxsan wakhtiga goynta ay yimaadaan maalinta xigta.
Wareejinta siligga caalamiga ah waxay qaadan kartaa ilaa shan maalmood oo shaqo in ay timaado iyadoo ku xidhan waddanka qaataha.
Ogsoonow in wareejinta siligu ay noqon karto mid aad qaali u ah, oo u dhaxaysa $15 ilaa $35 ee fiilooyinka maxaliga ah iyo ilaa $60 xawilaadaha caalamiga ah. Waxa kale oo jira, arrimo kale oo isku dari kara qiimaha kala iibsiga siligga, oo ay ku jiraan sarifka lacagaha oo liita iyo khidmadaha bangiyada.
Mararka qaarkood, wareejinta siligga waxaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan bangiyada kale ee wariyeyaasha, kuwaas oo laga yaabo inay kordhiyaan kharashka aad bixin doonto.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso wareejinta siliga
Wareejinta gurigu waxay ku iman kartaa saacado gudahood ama ka yar
Tallaabo kale loogama baahna qaatahaaga si uu lacagtooda u helo
#4. MoneyGram - Waxa ugu fiican bixinta lacagta degdega ah
In ka badan 200 oo waddan iyo dhulal, MoneyGram ayaa gacanta ku haya
shabakad goobo waxayna ku keentaa lacag daqiiqado gudahood. Adeeggoodu waa
oo la mid ah tan ay bixiso Western Union iyo qaatalayaashu waxay ka qaadan karaan lacag caddaan ah
meesha ay ku sugan yihiin. MoneyGram waxay taagan tahay marka ay timaado bixinta lacag caddaan ah oo degdeg ah.
Waxaad u diri kartaa lacag caddaan ah adigoo isticmaalaya mobaylka app-ka ama kanaalka online-ka ah meel kasta oo adduunka ka mid ah oo qaataha wuxuu helayaa lacagta saacado gudahood ama isla maalinta ugu badnaan.
Ogow in dirida lacagta isticmaalka MoneyGram ay noqon karto mid aad u badan
qaali ah. Celcelis ahaan, waxay ku kici kartaa inta u dhaxaysa $5 ilaa $12 in loo diro $200 ilaa $1,000 wadamada badi.
Waxa kale oo jira sicir-kordhin ku saabsan 0.60% sarrifka
heerka. Qadarka ugu badan ee aad ku wareejin karto MoneyGram waa $10,000.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso MoneyGram
Mid ka mid ah hababka ugu dhaqsaha badan ee loogu xawilo akoon bangi ama lacag caddaan ah oo adduunka oo dhan ah
#5. Venmo - Waxa ugu fiican waayo-aragnimada moobilka
Venom waxa ay bacdaa qaar ka mid ah qiimaynta ugu saraysa marka ay timaado khibrada mobilada ee leh 4.3-xiddig ee Google Play iyo 4.9-xiddig ee Dukaanka Apple.
Dirista iyo helitaanka lacagtu waa bilaash marka aad akoon bangi ku xidho app kaaga. Waxa kale oo aad Venmo ku xidhi kartaa kaadhadhka debit-ka ama kaadhadhka lacag-bixinta horeba akoonkaaga.
Isticmaalka kaarka deynta ee macaamilada Venmo waxay soo jiidan doontaa lacag ilaa 3%. Venmo waxay isticmaashaa habka wax kala iibsiga P2P, kaas oo kuu ogolaanaya inaad soo dirto ilaa $4,999.99 usbuuc gudihiis. Wax kala iibsiga Venmo sidoo kale wuxuu soo baxaa (la'aanteed qadarka wax kala iibsiga) ujeedooyinka tixraaca.
Ogow taas, inta lacagta aad ka hesho Venmo-gaaga ay soo baxayso
isla markaaba hadhaaga Venmo, kaash ku shubida akoon bangi waxay qaadan kartaa ilaa saddex maalmood oo shaqo. Waxa kale oo aad lacag ugu diri kartaa kaarka deynta adiga oo isticmaalaya akoonkaaga Venmo.
Adeeggu wuxuu inta badan qaataa ilaa 30 daqiiqo in lacagta lagu shubo
kaarka deynta oo soo jiidata khidmad ah 1.5%.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso Venmo
Waxaa aad loogu qiimeeyay aaladaha mobilada
Waa lacag la'aan waana fududahay in la isticmaalo sidoo kale waxay ka qayb qaadanaysaa bulsho ahaan
#6. Xum - Sida ugu fiican ee dirida lacagta ugu dhaqsaha badan (ku sawir MoneyGram)
Xoom waxaa ku shaqeeya PayPal wuxuuna ku takhasusay u wareejinta lacagaha in ka badan 160 wadan oo aduunka ah. Xoom waxa ay ku ogolanaysaa in aad xawilato ilaa 10,000 dollars, si kastaba ha ahaatee, inta ay badato qadarkaagu, way sii badanaysaa mudada sugitaanka
Wareejinta lacag badan, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad bixiso shaqsiyad badan
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad lacagta ku xawili karto adigoo isticmaalaya akoonkaaga Xoom waxaana ka mid ah:
Habka lacag bixinta xisaabta PayPal
Ku wareejinta Xoom waxay badanaa ku timaadaa daqiiqado gudahood. Xoom waxay iskaashi la samaysaa bangiyada kala duwan ee dibadda si ay ugu suurtagasho isticmaalayaasha inay lacagtooda si toos ah ugu helaan akoonkooda bangiga. Si kastaba ha ahaatee, wadamada qaarkood, waxa loo geyn karaa sidii wax-qaadis ama dib-u-rarid mobile.
Ogsoonow, ka wareejinta akoon bangi oo loo wareejiyo kan kale waxay soo jiidan kartaa khidmadaha Xoom. Kharashka guud ee wareejinta sidoo kale wuxuu noqon karaa dhinaca sare haddii aad isticmaasho credit ama kaarka deynta. Xoom waxa kale oo ay bixisaa qiime ka wanaagsan dirista xaddi sare oo lacag ah qaybo ka mid ah aduunka.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso Xoom
Wareejinta shisheeye waxay ku timaadaa daqiiqado gudahood wadamada qaar
#7. OFX - Waxay bixisaa qiimaha ugu jaban ee wareejinta caalamiga ah
Ma jiraan wax ujro dibadda ah oo OFX ah, iyadoon loo eegayn cadadka aad wareejiso. Sidoo kale, wareejinta khadka OFX waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala doorato inta u dhexeysa sameynta wareejinta heerka sarrifka hadda ama bartilmaameedka heerka wareejinta mustaqbalka - tani
Taas macnaheedu waa in lacagtaada la wareejin doono oo kaliya marka sarifku dhaco
u dhiganta kaaga.
Calaamadaynta OFX sidoo kale aad bay u hoosaysaa oo waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 55 waddan oo ka socda Maraykanka adoo isticmaalaya adeegyada OFX.
Ogow taas, lacagta ugu yar ee lagu wareejinayo OFX waa $1,000 iyada oo aan lahayn qaddarka wareejinta ugu badan. Bixinta lacagaha inta badan waxay qaadataa dhowr maalmood oo shaqo in la dhammaystiro.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso OFX
Adeeggu ma soo jiido wax kharash dibadda ah.
Akhri: Sidee buu u shaqeeyaa kaadhka deynta ee Robinhood?
#8. PayPal - Waxa ugu fiican inta ugu badan ee xawilaadda
Shaki kuma jiro in PayPal ay ugu sarreeyaan inta badan hababka kale ee wareejinta ee caanka ah. PayPal waxay u saamaxdaa isticmaalayaasha inay lacag la'aan ku diraan xisaab bangi oo ku taal Maraykanka.
Si ka duwan bixiyeyaasha kale, waxaad sidoo kale ku diri kartaa lacag adoo isticmaalaya kaarka debitka ee PayPal oo ah 2.9% kharashka lacagta la diray iyo 30 senti oo dheeraad ah.
Iyada oo ku xidhan lacagtaada, lacagtaada wareejinta ugu badan way awoodaa
inta u dhaxaysa $10,000 ilaa $60,000, taas oo ka weyn inta ugu badan todobaadlaha ah ee Venmo.
Si kastaba ha ahaatee, ogow taasi waa ka badbaado badan oo ammaan ah inaad u soo dirto lacag badan bangiga si aad ugu raaxaysato caymiska FDIC.
Ka dirida lacagta akoonkaaga PayPal koontada bangigu waxay caadiyan qaadataa 1 ilaa 4 maalmood oo shaqo si ay uga shaqeyso, iyadoo ku xidhan wakhtiga wareejinta la bilaabay.
Lacagaha la shaqeeyo sabtida iyo axada ama 7da fiidnimo ET inta badan waxay qaadataa waqti dheer si loo habeeyo. Waxa kale oo aad lacag ugu diri kartaa kaarka deynta adiga oo isticmaalaya PayPal kaaga
xisaabta. Si kastaba ha ahaatee, kaarka deynta waa in lagu xiraa xisaabta.
Waxaad soo diri kartaa oo aad lacag ku heli kartaa adigoo isticmaalaya app mobile ama adigoo booqanaya website-ka rasmiga ah ee PayPal. waxaad kaloo aadi kartaa PayPal. si loo abuuro xiriir gaar ah
in qoyska iyo saaxiibada ay isticmaali karaan si ay lacag kuugu soo diraan.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso PayPal
Kuwa ugu caansan adduunka oo leh in ka badan afar milyan oo akoonnada firfircoon ee adduunka oo dhan
Waxay bixisaa lacagta ugu badan ee wareejinta
#9. Google Pay - Sida ugu fiican xawligeeda wareejinta gudaha
Google Pay, waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad lacagta u xawiso waa koodka QR, magaca qaataha oo buuxa, ciwaankiisa, iyo nambarka telefoonka. Google Pay sidoo kale waxa ay leedahay boorsada app-ka ah isticmaalayaashuna waxa ay lacag ugu diri karaan kaadhka debit-ka si toos ah boorsada app-ka. Google Pay waxa ay haysataa xawilaadda ugu badan ee $5,000 todobaadkii.
Isticmaalayaashu waxay si toos ah uga maalgelin karaan akoonadooda bangiga iyo kaadhadhka lacag-bixinta ee akoonkooda Google Pay. Si kastaba ha ahaatee, ka soo horjeeda waa kiiska kaararka deynta iyo kaararka prepaid.
Ogsoonow in Google Pay uu ka duwan yahay adeegyada kale ee xawaaladaha iyo abka. Waxay dabooshaa boqolkiiba boqol dhammaan kuwa la xaqiijiyay ee aan la oggolayn
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso Google Pay
Hab fudud oo bilaash ah oo lacag loogu xawilo kaadhka deynta
Isku dhafka ugu wanaagsan ee adeegyada lacag bixinta ee iimaylka
#10. Caqli leh - Waxa ugu fiican ee fududaynta isdiiwaangelinta
Haddii aad raadinayso madal bixisa ku habboonaanta moobilka iyo madalkeeda internetka labadaba, Wise waa habka saxda ah ee loo maro. Isticmaalayaashu waxay si fudud ula saxiixan karaan xisaabtooda Google, Apple, ama Facebook.
Sicirka sarifka xikmadda leh waxaa caadi ahaan la dammaanad qaaday hal maalin waxaanad lacag u xawili kartaa in ka badan 80 wadan adigoo isticmaalaya akoonkaaga Wise.
Sidoo kale, ma jiro wax lagu sarifayo wax-is-weydaarsiga Wise. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad bixisaa kharashka sarifka si aad u bilowdo a
Ogsoonow in inta badan, laga yaabo in lagaa rabo inaad bixiso laba khidmad markaad lacag wareejinayso adigoo isticmaalaya akoonkaaga Wise. Caqliga badana wuxuu wax ka qaadaa hore
khidmad (taasoo kala duwanaan karta iyadoo loo eegayo khidmadaha wareejintaada) iyo khidmadda beddelka oo aan ka badnayn $1. U soo dirida lacagta Wise ee ka timid Maraykanka waxay inta badan ku qaadataa laba maalmood in lacagta la keeno.
Sababaha ay tahay inaad ka fikirto xigmadda
Wax calaamad u ah qiimaha sarifka lacagaha qalaad
Waayo-aragnimada mareegaha isticmaale-saaxiibtinimo
#11. Zelle - Waxay bixisaa keenista lacagaha degdega ah
Zella, ka wareejinta lacag akoon bangi oo kale ee hay'adaha maaliyadeed ee kala duwan waxay qaadataa daqiiqado in la keeno. In ka badan 1,000 hay'adood oo maaliyadeed iyo ururro deyman ayaa Zelle kula midoobey shabakadooda.
Sidaa darteed, waxay la macno tahay in boqolaal milyan oo macaamiisha bangigu ay ka faa'iidaysan karaan Zelle iyaga oo isticmaalaya barnaamijyadooda moobaylka ama degelka bangiga. Haddii bangigaagu aanu ka mid ahayn shabakada Zelle, waxa kale oo aad u soo dejisan kartaa sidii barnaamij gooni ah.
Ogow taas, xisaab bangi Maraykan ah ayaa loo baahan yahay si loo maalgeliyo loona helo
lacag ku leh akoonkaaga Zelle. Zelle wax lacag ah oo wax kala beddelasho ah kama qaado,
si kastaba ha ahaatee, ma mamnuucayaan mid ka mid ah bangiyada ay wada shaqaynta leeyihiin in ay ku dallacaan lacagaha wax kala iibsiga.
Halka xadka kala wareejinta ee Zelle uu ku kala duwan yahay bangi ilaa bangi, inta badan bangiyada waaweyn waxay dejiyaan ugu badnaan wareejintooda min $2,000 ilaa $2,500 maalintii.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso Zelle
Lacag degdeg ah oo lagu geynayo daqiiqado gudahood
Waxa uu ku xidhaa in ka badan boqol milyan oo qof iyada oo la dhexgelinayo in ka badan kun bangi iyo ururrada deymaha.
Akhri: Sida Loo Isticmaalo Kaarka Amaahda Si Loo Dhiso Amaahda 2022
#12. Walmart2Wamart - Ugu sarreeya wareejinta aan bangiyada ahayn
Marka ay timaado wareejinta lacagta caddaanka ah, Walmart way ka jaban tahay inta badan shirkadaha xawaaladaha ee dhaqameed ee maanta jira sida Xoom iyo Western Union.
Waxaad u diri kartaa lacag caddaan ah mid ka mid ah dukaamada Walmart ee US, qaatahana wuxuu ku qaadan karaa lacagta caddaanka ah daqiiqado gudahood.
Ogow in, gobolada intooda badan, lacagta ugu badan ee aad wareejin karto maalintii waa $2,999.99. khidmaddu waxay ka bilaabataa $4 waxayna ku kala duwanaan kartaa iyadoo loo eegayo qaddarka wareejintaada.
Sababaha ay tahay inaad u tixgeliso Walmart
Heerarka ugu jaban marka la barbar dhigo hababka kale ee lacag bixinta
#13. InstaReM - Waxa ugu fiican qiimaha sarifka suuqa dhexe
Haddii aad raadinayso hab casri ah oo lacag caddaan ah oo bixiya qiimaha suuqa dhexe, InstaReM waa doorashadaada ugu fiican. InstaReM waxa ay ku dalacdaa boqolkiiba xadiga xawilaaddaada sida ujrada wax kala iibsigaaga. InstaReM kuma dalaco qiimayaasha wax kala iibsiga.
Inta badan wareejinta lacagta caddaanka ah ee InstaReM waxay ku timaadaa hal ilaa laba maalmood oo shaqo gudahood. Waxaad ku maalgalin kartaa akoonkaaga InstaReM adoo isticmaalaya wareejinta lacagta elegtarooniga ah, wareejinta siliga, ama wareejinta bangiga ee wadamada oo dhan.
Isticmaalayaasha Australia waxay ku maalgelin karaan xisaabaadkooda POLI, kuwa ku jira EU waxay sidoo kale isticmaali karaan kaararka deynta si ay u maalgeliyaan xisaabaadkooda. FPX waxay diyaar u tahay isticmaalayaasha Malaysiya, halka isticmaalayaasha Maraykanku ay isticmaali karaan ACH jiid iyo Wareejinta Bangiga si ay u maalgeliyaan akoonkooda InstaReM.
Inta ugu yar iyo xadiga ugu badan ee xawilaadu way kala duwan yihiin si waafaqsan wadankaaga.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso InstaReM
Qiimaha sarifku waxa uu le'eg yahay eber-margin
Lacag ka soo diri kara meelo kala duwan oo adduunka ah
#14. World Remit - Habka ugu fiican uguna dhaqsaha badan ee lacag loogu diro Hindiya
Haddii bartilmaameedka sanduuqaagu yahay Hindiya, markaa World Remit waa doorashadaada ugu fiican. World Remit Mobile App-ka ayaa ku leh qiimayn wanaagsan Google Play
Store iyo Apple App Store.
World Remit, waxaad si toos ah lacag ugu diri kartaa akoon bangi Hindi ah ama ganacsi. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa app-ka si aad ugu darto credits mobile telefoon kasta oo prepaid ah gudaha Hindiya.
Ogsoonow in World Remit ay soo jiidato lacag wareejin ka soo diraha, taas oo aad aragto ka hor inta aanad bilaabin wareejinta. Waxa kale oo aad bixin doontaa sarifka lacagaha xawilaadda adduunka. Hubi inaad hubiso sicirka ka hor intaadan dirin lacagta si aad uga fogaato lumin qiimaha sarifka Reuters iyo Google.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso Xawaaladda Adduunka
Waxay kuu ogolaataa inaad si toos ah lacag uga hesho akoonkaaga Hindida oo ka socda in ka badan konton waddan
U hel lacagahaaga sida kor-u-qaadista ama wareejinta bangiga
Wareejintu waxay ku timaadaa toban daqiiqo gudahood halka wax iibsiga mobilada ay isla markiiba yimaadaan
#15. Xawaaladaha Ria - Waxa ugu fiican si loo fududeeyo helitaanka lacagaha
Ria waa mid ka mid ah hababka xawilaadda lacagaha ee ugu da'da weyn
ganacsiga ilaa 1980-meeyadii. Ria waxay leedahay in ka badan 377,000 goobood oo aduunka oo dhan ah
oo leh faa'iido lacag caddaan ah oo laga soo qaado Hindiya. Isdiiwaangelinta Ria waa bilaash adigana
Uma baahnid xisaab si aad lacag uga hesho Ria.
Kharashaadka wax kala iibsiga ee aad ku bixin doonto wareejinta waxay ku xidhan tahay inta aad dirayso.
Ogsoonow si aad u aragto hababka lacag bixinta oo buuxa, waxaad u baahan tahay inaad si buuxda isaga diiwaan geliso Ria. Xaaladaha qaarkood, Ria waxaa laga yaabaa inaysan dalacin khidmad wax kala iibsiga. Si kastaba ha ahaatee, waxay wali ka faa'iideysan doonaan wax kala iibsiga iyagoo calaamadeynaya heerka sarrifka. Ria waxay haysataa xadka ugu badan ee wareejinta oo ah $2,999 maalintii iyo $7,999 in ka badan 30 maalmood gudaha Maraykanka.
Boqortooyada Midowday, lacagta ugu badan ee wareejintu waa £4,999 muddo 30 maalmood ah.
Sababaha ay tahay inaad tixgeliso Xawaaladda Ria
Uma baahnid akoon si aad lacag caddaan ah ugu hesho Ria
Lacagaha waxaa si toos ah loogu shubi karaa akoonka dadka qaata
Tirada abka wareejinta iyo adeegyada, waxa jira arrimo gaar ah oo la tixgeliyo marka aad dooranayso habka wareejinta ee lacagtaada. Waxaa ka mid ah xawaaraha xawilaadda, kharashka xawilaadda lacagaha, fududaynta isticmaalka habka, goobta aad lacagta u dirayso iyo sida wanaagsan, nidaamku u taageero macaamiishiisa.
Markaad arrimahaas oo dhan tixgeliso, in lacag loo diro meel kasta oo adduunka ka mid ah maanta aad ayay uga sahlan tahay sidii ay ahaan jirtay labaatan sano ka hor.
Sidee Kaniisadaha Lacag Loogu Sameeyaa? Siyaabaha Bixinta Sare
Kaniisadaha Mega ee Maraykanka iyo adduunka oo dhan ayaa caan ku ah koraya. Tani kaliya ma keenayso…
20 Siyaabood oo Lacag laguugu siiyo si aad uga jawaabto Su'aalaha 2021 | Samee In ka badan $ 5,000/bishii
Haddii aad liis gareyn lahayd tirada su'aalaha aad ka jawaabto maalin kasta, waxay noqon kartaa boqolaal.
Qof kastaa wuxuu leeyahay hiwaayad gaar ah oo uu waqti ku bixiyo sababtoo ah madadaalada iyo qancinta laga helo…